Chiedza chemwenje, Edison Mabumba, Tambo Kuvhenekesa - Omita Lightig
Let Yedu Yehunyanzvi uye Kubatsira kweChiedza kuve kwako.
Bhizinesi Base paTrust, Trust Base paKuziva.
Omita Lightig neRegistered yakawanikwa makumi maviri emamiriyoni RMB akawanikwa muna2009. Semugadziri akasarudzika, mugadziri uye mutengesi wekushongedza mwenje fixtur neEdison mababu, zvigadzirwa zvedu nebasa zvanga zvichitendera nevatengi vese. Tine zvivakwa zviviri zvefekitori izvo zviri kuDongguan Guta rine 6000M2 Fekisheni yekushambadzira, 2000M2 warehourse uye 400M2 Showroom. Isu tinewo timu yehunyanzvi kubva pakugadzira, kugadzira uye QC kudzora, uye Kushambadzira uye timu yekutengesa. Zvigadzirwa zvedu uye sevhisi zvave kuwedzera kune nyika dzinopfuura makumi maviri neshanu, Europea neU.SA seMusika Mukuru, zvisinei isu zvakare tine bhizinesi mune idzo dzinomhanyisa nyika dzichiri kusimukira kusanganisira Brazil, Chile neSouth Africa, Nigeria, Malaysia. Mazhinji ezvigadzirwa zvedu ndeyeEC ​​Rohs akasimbiswa, uye zvirokwazvo zvakare ane UL neSAA.
Tsika Mwenje & Nhau
Wana kurudziro kubva kune chimwe chinhu chatinoratidza pano
Rinoyerera pendant sekristaro mwenje-Fr ...
Algorithm chiratidzo chemasvomhu nhetembo dzezvakasikwa. dhizaini yekuvhenekesa naToan nguyen, iboka remagirobhu anoita kunge achiyangarara muchadenga seboka reshiri, kana mvura yechando inonaya. chirongwa ichi chinopa nziyo dzisingaperi umo marambi edenderedzwa anogona kumiswa pa d ...
Linear Pendant mwenje nemaS14s an ...
Pakutanga, iyo S14s (mapini maviri), uye S14d (pini imwe) dhizaini yemamwe magirazi mahombe. Kazhinji, pane 300mm, 500mm, uye 1000mm yeS14s (mapini maviri), uye S14d (pini imwe) mwenje wakatsetseka, uye ese iwo anogona kunge akajeka vhezheni uye opal vhezheni. Pano ini ndinonyora edu proucts uye musangano ...
Kudzokera kune yekutanga Edison bulb pu ...
Muna 1809, Englisg mugadziri Humphry Davy akagadzira mwenje wekutanga wemagetsi. Aive akabatanidza matanda akagadzirwa nemarasha, chimiro chemakemikari element kabhoni, kune bhatiri rine waya mbiri. Kunyangwe iwo mwenje usina kugara kwenguva refu, zvakaratidza kuti zvimwe zvinhu zvakave zvinopisa kwazvo taht zvinopenya kana magetsi pa ...
Usati wapindura uyu mubvunzo rega uone kuti chii UV UV. Kutanga, ngationgororei pfungwa yeUV. UV, kana ultraviolet, kana kuti ultraviolet, inonzi electromagnetic wave ine wavelength iri pakati pe10nm ne400nm. UV yeakasiyana wave bhendi inogona kuganhurirwa muUVA, UVB uye UVC. UVA: iyo wavelength iri ...
Tsika mwenje matte chena uye ...
Mune imba, chivakwa, tinogona kuona chena ruvara chero kupi, chena madziro, chena machena pasi, chena mbiru. Nekudaro, iyo chena inogona kuve dzakasiyana, dzakasiyana nekudzika kwemavara, akachena machena, off-chena, matte chena, akatsetseka akachena. Nhasi, tichaenda kunokurukura kuti nei matte chena ingafarirwa nevagadziri ....
Iwe unoda kukwira zvakawanda nezve isu kana zvigadzirwa zvedu？